Izindawo zokuhlala e- Lam Linh Tây Ninh - I-Airbnb
Izindawo zokuhlala e- Lam Linh Tây Ninh
Tây Ninh, Tây Ninh Province, i-Vietnam
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Mai Linh
· Amagumbi okugeza ahlanganyelwayo angu-4
Indawo yethu inikeza isipiliyoni sesikhathi esisodwa kubahambi abazamayo . Igumbi ngalinye linengadi enhle encane, indlu yangasese ehlelekile enombhede othokomele osayizi wenkosi. Isivakashi esihlala lapha singajabulela nokuba yimfihlo kwendawo kanye nokubuka okuhle kweNtaba Yentombi Emnyama ukusuka ophahleni lwethu, noma nje sihlale phansi sizipholele emoyeni omusha wasekuseni ngezingoma zezinyoni nezimbali nxazonke. I-inthanethi engenantambo iyatholakala kuyo yonke indawo. Izingane ezingaphansi kweminyaka engu-11 zihlala mahhala. Ukupaka Kwamahhala, futhi.
Igumbi 1: Leli yigumbi lomndeni. Inombhede olingana inkosi kanye nemibhede emibili eyisigqiki, ikamelo layo lokugezela, ikhabethe elikhulu lokungena, i-TV ye-inthanethi, nengadi yezilwane ezincanyana ngaphakathi.
Igumbi lesi-2 kanye neGumbi lesi-3: Lawa ngamakamelo amabili okulala anombhede olingana nenkosi nomnyango obheke indawo. Inegumbi layo lokugezela, ikhabethe elikhulu lokungena, i-TV ye-inthanethi kanye nengadi enhle ngaphakathi.
Womathathu amakamelo okulala ahlanganyela ngendlela yehholo kanye negceke elihle elinamathunzi ezihlahla nezimbali.
Ikhishi eligcwele ngokugcwele lilungele izivakashi nazo zonke izinto ezidingekayo kanye ne-condiment.
Ingadi enhle enezihlalo ngaphansi komthunzi lapho izivakashi zingafunda khona incwadi, ziphuze ubhiya, noma zivele zijabulele ukucula kwenyoni ekuseni kakhulu.
Uphahla lungenye indawo enhle yokubuka iNtaba Emnyama Enhle kahle ngesikhathi sasemini noma ukhonze umoya ohelezayo wasebusuku.
Ikhaya lethu lisendaweni ethule. Uzozwa sengathi uthole igugu elifihliwe uma ufika ekhaya lethu. Ngempela, ikhaya lakho futhi lapho uza e-Tây Ninh. Nokho, kungaphansi nje kwemizuzu emi-5 ukuya edolobheni. Kulula kakhulu ukufika ezindaweni eziningi zezivakashi e-Tây Ninh. Inqwaba yezindawo zokudlela eziseduze, okuhlanganisa neyokudla imifino ehloniphekile.
Ibungazwe ngu-Mai Linh
Leli futhi yikhaya lami, ngakho ngitholakala ngaphandle kwamahora okusebenza. Kodwa ungakhathazeki, ngizokuthumela imiyalelo enemininingwane yokuthi uzihlole wena ngokwakho.